[Review] Top 6 sữa rửa mặt BHA giúp làm sạch da hiệu quả | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 sữa rửa mặt BHA giúp làm sạch da hiệu quả | Muasalebang in Muasalebang
Kwabesifazane abathanda ubuhle, i-BHA cishe akuselona igama eliyinqaba. Lesi yisithako esisebenzayo okuxoxwe ngaso emaqenjini anobuhle eminyakeni embalwa edlule. Thola amaphuzu aqinile ngokusetshenziswa kwesikhumba esithandwa yizinduna, esibuthuntu. Ngakho yini ngempela i-BHA? Kukhona imigqa Iyiphi i-BHA yokuhlanza ubuso ehamba phambili futhi ekufanele ukuyithenga namuhla?? Ake sithole ngokushesha ngesihloko esilandelayo ukuze sithole impendulo enembe kakhulu!
1 Yini i-BHA?
2 Kungani kufanele usebenzise i-BHA yokuhlanza?
3 Top 6 bha cleanser ukusiza ukuhlanza isikhumba ngempumelelo
3.1 3.1 I-Cosrx I-pH ephansi I-Good Morning Gel Cleanser
3.2 3.2 Abanye Nge-Mi AHA-BHA-PHA Izinsuku Ezingama-30 Izinduna Ezicwebile Ezicwebile
3.3 3.3 I-BHA I-CeraVe Renewing SA Cleanser ithambile esikhumbeni
3.4 3.4 BHA – Ijeli Yokuhlanza I-Eucerin Pro Acne
3.5 3.5 Ukukhetha kuka-Paula Ukusula Izimbotshana Isihlanzisi Esijwayelekile
3.6 3.6 Igwebu Lokuhlanza I-Vichy Normaderm
I-BHA imele i-Beta Hydroxy Acid, eyaziwa nangokuthi i-Salicylic Acid. I-BHA iyi-asidi esekelwe kuwoyela ye-inorganic ekhipha futhi iphathe kahle kakhulu izinduna.
Ngenxa yezakhiwo zayo ezisekelwe kuwoyela, iSalicylic Acid (BHA) iqukethe ikhono lokungena nokungena lijule ezimbotsheni zesikhumba. Ngaphezu kwalokho, inamandla okudiliza amangqamuzana esikhumba afile anamathela ezimbotsheni. Ngenxa yalokho, ingakwazi ukuqeda ukuvaleka kwama-pores, kuyilapho ivimbela ama-blackheads, noma amakhanda amhlophe kanye nokusiza ukulawula i-sebum kangcono.
Kungani kufanele usebenzise i-BHA yokuhlanza?
Njengoba sonke sazi, ukuhlanza okuqukethe i-BHA umugqa womkhiqizo othandwa kakhulu futhi othenjwa abantu abasha. Umkhuba wamanje, ezigabeni eziningi ukugeza ubuso ngenxa yesikhumba esinamafutha, izinduna eziningi ziqukethe i-BHA. Kuyi-asidi esekwe kuwoyela engangena ezimbotsheni ezigcwele i-sebum. Ngaleyo ndlela iphusha ukungcola, i-sebum evalekile isuka phezulu esikhumbeni, kanye nokulawula inani lamafutha, i-antibacterial, kanye ne-anti-inflammatory.
Ngokusho kochwepheshe, ukusebenzisa ukugeza ubuso nge-BHA kuzonikeza ikhono elivelele lokuhlanza. I-BHA isiza ukususa ukungcola kanye ne-sebum ukuze inikeze umoya omncane futhi idale izimo ezivumayo. Ngokwenza kanjalo imisoco evela kwezinye izimonyo ingene ijule esikhunjeni. Ngenxa yalezi zizathu, kungabonakala ukuthi ukusetshenziswa okuvamile kwezihlanzi eziqukethe i-BHA kungathuthukisa isimo se-sebum. Iletha isikhumba esinempilo, esimhlophe esikhanyayo, ilwa nezinhlobo eziningi zezinduna, inciphisa izibazi ezimnyama futhi inciphise inqubo yokuguga jikelele.
Top 6 bha cleanser ukusiza ukuhlanza isikhumba ngempumelelo
Lapha sizokwethula phezulu 6 BHA zokuhlanza ubuso Okudume kakhulu kumakhasimende. Sethemba ukuthi lokhu kuzokusiza lapho ukhetha isihlanzi esifanele se-BHA.
3.1 I-Cosrx I-pH ephansi I-Good Morning Gel Cleanser
I-Cosrx Low pH I-Good Morning inamandla okuhlanza kodwa ungasusi isikhumba umswakama waso wemvelo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uletha i-pH efanele esikhumbeni, ngaleyo ndlela usize ukwenza isikhumba sihlanzeke futhi sithambile. Ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi basazibuza ukuthi i-Cosrx cleanser iphusha induna? Futhi impendulo inguyebo, ngoba umkhiqizo uqukethe amafutha esihlahla setiye ukuhlanza isikhumba esinamafutha kanye nezithako ze-BHA zemvelo ukusiza ukulwa nezinduna.
I-Cosrx Low pH Good Morning futhi inama-surfactants amaningi: I-Cocamidopropyl Betaine, i-Sodium Lauroyl Methyl Isethionate ne-Polysorbate 20….ihlinzeka ngamandla okuhlanza ale jeli yokuhlanza ubuso ye-Cosrx.
Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo uqukethe ama-asidi emvelo kufomula efana ne-Betaine Salicylate (i-BHA yemvelo evela ku-beetroot) ne-Citric Acid (AHA evela esithelweni) Ihlinzeka ngokukhipha okuthambile, ngoba izongena esikhumbeni. amaseli esikhumba. Iphinde ikhuthaze ukukhiqizwa kwamaseli amasha ukuze kuncishiswe amabala amnyama nemibimbi yesikhumba.
Lesi sihlanzi sobuso se-BHA siphinde sikhishwe ezingxenyeni zemvelo: amaqabunga e-lotus, izinaliti zikaphayini, izimpande ze-cassava … Lezi zonke izithako ezinobungozi, ezikwazi ukuphulukisa amanxeba futhi zithobe isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 215,000 VND
Bhekisela: [Review] Ingabe i-Fresh Soy Face cleanser inhle ngempela?
3.2 Abanye Nge-Mi AHA-BHA-PHA Izinsuku Ezingama-30 Izinduna Ezicwebile Ezicwebile
Abanye Nge-Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Acne ungumnikazi wedizayini yeshubhu lepulasitiki elinomthamo we-100ml. Uma uthi nhlá, ibonakala inkulu impela kodwa ukuyibamba akunzima kakhulu, ikakhulukazi ithoni yendabuko eluhlaza okwesibhakabhaka iletha ubuhle obupholile nobukhangayo. Abanye NgeMi Facial Cleanser Lokhu kunokuthungwa kwejeli okunekhono elihle lokukhihliza amagwebu, ngaleyo ndlela kususe ngempumelelo ukungcola kanye ne-sebum esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uqukethe i-AHA (Citric Acid) enomphumela wokuhlanza kanye nokuthuthukisa isakhiwo ebusweni besikhumba, ukwandisa ukunwebeka kwesikhumba.
Isithako esikhethekile kakhulu yi-BHA (Salicylic Acid) enomphumela wokukhipha ukungcola, amafutha amaningi kanye nezingqimba zesikhumba ezifile ekujuleni kwezimbotshana. Ngaleyo ndlela kusiza ukuvala ama-pores kanye nokunciphisa izimo ze-acne efihliwe, i-acne bran esikhumbeni. Isithako se-PHA (Gluconolactone) sokulwa nokuvuvukala okusebenzayo, ukulwa namagciwane kanye nokulungisa isikhumba ngemuva kokulimala, futhi sigcina umswakama esikhumbeni. Kuhlanganiswe ne-Centella Asiatica Extract ukwelapha izinduna, nciphisa amabala amnyama enziwa izinduna futhi kudambise isikhumba uma kuvela izinduna.
Intengo yesithenjwa: 275,000 VND.
3.3 I-BHA I-CeraVe Renewing SA Cleanser ithambile esikhumbeni
I-CeraVe Renewing SA Cleanser iza ngedizayini yegobolondo elimhlophe elimsulwa nesibhakabhaka. Emzimbeni, ulwazi olugcwele noluqondile lubhaliwe mayelana nokuhlanza, kuhlanganiswe nepompo elula, ehlanzekile futhi kukusiza ukuthi uthole umkhiqizo kalula. I-Cerave Renewing SA Cleanser iyijeli ewuketshezi, engenambala futhi ecishe ayinaphunga. Umkhiqizo unamagwebu kancane, ngakho-ke igwebu likhulu impela, okufakazela ukuthi isihlanzi sinensipho encane futhi sine-pH ephansi, ephephile esikhumbeni.
Ngokwezithako, umkhiqizo uqukethe Amanzi Ahlanzekile – isithako esingewona amanzi nje. Lawa amanzi ahlanziwe aselashiwe kanye nezinto eziyingozi ezisuswe ngokuphelele nge-osmosis ehlehlayo ukuletha umphumela wokuthambisa. Ihlanganiswe nezithako ze-BHA, ikhipha ngobumnene amangqamuzana afile kanye nokungcola ekujuleni kwezimbotshana, kusize ukuvimbela izinduna kanye nama-bacterium abangela induna. Kanye novithamini D, kuyasiza ekwandiseni ukumelana nesikhumba, kusenze sibe nempilo, kube lula ukumunca izakhamzimba ngempumelelo.
Intengo yesithenjwa: 385,000 VND
3.4 BHA – Ijeli Yokuhlanza I-Eucerin Pro Acne
Ulayini womkhiqizo we-Eucerin Pro Acne Solution usobala futhi unombala oluhlaza kancane, okwenza kube lula ukubona inani leGel elisele ebhodleleni. Ukusetshenziswa okukhulu kwe-Eucerin Pro Acne Solution Cleansing Gel ukususa induna nokuvimbela ukuvela kwezinduna. Ngokuhambisana nalokho, ikhono lokususa ukungcola, i-sebum kanye nama-pores amancane liye laqinisekiswa ochwepheshe.
Mayelana nezithako, i-Eucerin Pro Acne Solution Cleansing Gel iqukethe i-Citric Acid enemiphumela yokukhipha, isusa i-sebum ukusiza ukuvala izimbotshana. Ngaphezu kwalokho, ama-antioxidants ku-Citric Acid avimbela isikhumba ekukhiqizeni i-melanin – imbangela eyinhloko ye-melasma nama-freckles Ehlanganiswe ne-Salicylic Acid (BHA) yomphumela wokulawula inani le-sebum efihliwe, esekela ukukhishwa kwe-sebum. .
Ngaphandle kwalokho, I-Eucerin yokuhlanza ubuso Lokhu futhi kuqukethe i-Sodium Chloride, i-Sodium Benzoate, i-Salicylic Acid. Zontathu lezi zinto zinemiphumela elwa namagciwane, ngaphandle kokuvuvukala, ukuvala inzalo kanye nokunciphisa ububomvu bezindawo zezinduna.
Intengo yesithenjwa: 270,000 VND.
3.5 Ukukhetha kuka-Paula Ukusula Izimbotshana Isihlanzisi Esijwayelekile
I-Paula’s Choice Clear Pore Normalizing Cleanser ingenye yezindawo zokugeza ubuso zika-Paula’s Choice ezithengiswa kakhulu. Umkhiqizo usetshenziswa ngendlela efanele izidingo zabasebenzisi abaningi njengoba uhlanza ngobumnene ekujuleni kwezimbotshana, ulungele isikhumba noma ukwakheka okuvaleka kalula futhi okunamafutha. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unokuthungwa okuwuketshezi futhi mncane njengamanzi, ngakho-ke uma ugwebu esandleni, kunegwebu elincane kakhulu. Ngakho-ke, uma uyisebenzisa, uzoyithola ibiza kakhulu kunezinye izinto zokugeza ubuso kodwa iphephe kakhulu esikhumbeni, ikakhulukazi esikhumbeni esinezinduna.
Lesi sihlanzi sikaPaula’s Choice BHA sinezithako eziningi ezizuzisa isikhumba njenge: I-Sodium Lauroyl Sarcosinate – isisetshenziswa esikhishwa kumafutha kakhukhunathi ukuze sisize ukuhlanza isikhumba ngempumelelo kodwa ngobumnene nangokuphephile.
Ngaphezu kwalokho, i-Sodium Laureth Sulfate ikhishwe isebenza njenge-ejenti enegwebu ngamanani amancane, ukusiza ukususa inani elikhulu lamafutha esikhumbeni ngaphandle kokudala umonakalo noma ukukhipha isikhumba sezinto ezithambisayo zemvelo. Isithako esisebenzayo I-Glycerin iyi-humectant ethandwayo enomphumela wokuthambisa ubuso besikhumba. Ihlanganiswe nePanthenol (pro-vitamin B5) iphinde isize ukumunca umswakama, igcine umswakama futhi inikeze umgoqo omuhle wesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 499,000 VND.
3.6 Igwebu Lokuhlanza I-Vichy Normaderm
I-Vichy Normaderm Cleansing Matifying Foam yakhelwe ngokukhethekile isikhumba esinamafutha kanye nezinduna. Iyingxenye ye-super benign cosmetic line yohlobo oludumile lwesiFulentshi i-Vichy, ukuze labo abanesikhumba esinamafutha noma esibucayi bangayisebenzisa ngokuzethemba.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi umugqa wokwelapha induna, umkhiqizo unesithako esiyinhloko se-2% Salicylic Acid, esilungele ukusetshenziswa ngokungcola nesikhumba se-sebum. Ngaphezu kwalokho, kunenqwaba yezinye izithako ezifana ne-glycerin eyisithako esisebenzayo esiza isikhumba ukuthi singomi futhi siqine lapho ugeza ubuso. Ihlanganiswe ne-Phenoxyethanol, iyi-antiseptic emnene futhi inciphisa ukuvuvukala okubangelwa izinduna.
Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ye-Vichy Normaderm ifakwe amagwebu ngaphambili, ngakho-ke kulula kakhulu kubasebenzisi. Uma usebenzisa, udinga nje ukukhumbula ukunyakazisa kahle ngaphambi kokukhipha umkhiqizo, kunegwebu elithambile, elithambile elisiza ukuhlanza isikhumba, singasenamafutha kodwa futhi singaqinile. Ngaphezu kwalokho, okokuhlanza kuqukethe i-BHA ukusiza ukuhlanza ekujuleni kwama-pores, ukuvimbela ukuvala nokubunjwa kwama-acne ngempumelelo. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi usebenzise lo mkhiqizo lapho isikhumba sisinda futhi sivaliwe, lapho i-acne bran kanye ne-acne ibonakala kakhulu.
Ngenhla ngu phezulu 6 BHA zokuhlanza ubuso Iphephile futhi yaziswa kakhulu abesifazane emakethe. I-BHA yaziwa njenge-asidi esebenza kahle esikhumbeni esinamafutha, esinezinduna. Ukuletha ukwelashwa okuphumelelayo kwezinduna nokunakekelwa okuhle kwesikhumba kodwa kuphephe kakhulu. Ngakho-ke ulindeleni ngaphandle kokuzama ukukhetha owodwa wemikhiqizo engenhla futhi uzizwele umphumela wakho?
3 cách đính kèm hình ảnh khi gửi email trên iPhone | Muasalebang